कल्पनाको ‘आँखै नलाउनी’ गीत सार्वजनिक
Thursday October 18, 2018 | |
काठमाडौं– सुनखानी म्युजिक प्रालिको प्रस्तुतीमा गायिका कल्पना सुनुवारको ‘आँखै नलाउनी’ बोल रहेको लोक तथा दोहोरी गीत सार्वजनिक भएको छ । गीतमा चर्चित गीतकार, संगीतकार तथा गायक बिरही कार्कीले शब्द तथा संगीत भरेका छन् । जसमा गायक कार्की र गायिका सुनुवारको सुमधुर स्वर रहेको छ । गीतको संगीत संयोजन भने गायक तथा संगीत संयोजक कमल सौरागले गरेका हुन् । गीतलाई म्युजिक भिडियोसहित सार्वजनिक गरिएको छ । जसलाई क्रान्ती केसीले निर्देशन गरेका छन् । गीतमा पछिल्लो समय निकै ब्यस्त रहेका चर्चित मोडल दुर्गेश थापा र रश्मी तामाङको नृत्य रहेको छ ।
भिडियोलाई अजय रेग्मीलले छायांकन गरेका हुन्, भने निर्देशक केसीले नै सम्पादन गरेका हुन् । उक्त गीतलाई बजार ब्यवस्थापन भने सुनखानी म्युजिक प्रालिले नै गरेको छ । केही समयअघि गायिका सुनुवारले ‘डाँडैमा बिजुली आयो’ बोलको लोक तथा दोहोरी गीत सार्वजनिक गरेकी थिईन् । जसलाई कार्की र सुनुवारले नै स्वर भरेका थिए । गीत निकै चर्चित बन्न सफल भएको थियो । जसले ‘म्युजिक खबर म्युजिक अवार्ड–२०७४’मा सर्बोत्कृष्ट नव–गायिका, निर्देशक र मोडलको अवार्ड जित्न सफल भएको थियो ।
चलचित्र ‘प्रसाद’ को गीत ‘वनकी चरी’ सार्वजनिक
काठमाडौं । निर्देशक दिनेश राउतद्वारा निर्देशित फिल्म ‘प्रसाद’ को दोस्रो गीत आइतबार सार्वजनिक भएको छ । यसअघि रिलिज गरिएको गीत ‘लै लै’ प्रति राम्रो प्रतिक्रिया आउँदै गरेका बेला प्रसादको दोस्रो…
चलचित्र ‘जात्रै जात्रा’ बन्दै, वर्षा र विपिनको अभिनय रहने
काठमाडौं । चलचित्र ‘जात्रै जात्रा’ को बिहीबार राजधानीमा एक कार्यक्रमका बिच घोषणा गरिएको छ । प्रदीप भट्टराईको निर्देशन रहने चलचित्रमा विपिन कार्की, रविन्द्र सिंह बानियाँ, रविन्द्र झा, बर्षा राउत, प्रकाश…
गायक राज चाम्लिङको नयाँ म्यूजिक भिडियो सार्वजनिक
काठमाडौं । गायक तथा निर्देशक राज चाम्लिङको नयाँ म्यूजिक भिडियो सार्वजनिक भएको छ । ‘म रुदैछु विरानो परदेशमा’ बोलको गीत सङ्ग्स नेपालले यूट्युबमार्फत सार्वजनिक गरेको हो । गायक राईकै शब्द,…
जापानमा अन्तर्राष्ट्रिय हाइकु महोत्सव सम्पन्न
जापान । १५ वर्ष पछि जापानमा अन्तर्राष्ट्रिय हाइकु महोत्सव सम्पन्न भएको छ । टोकियोमा आयोजित नेपाली हाइकू महोत्सवले आठ बुँदे टोकियो घोषणा पत्र समेत जारी गरेको छ । कार्यक्रममा जापानका…
प्रकृतिको ‘ब्रोकन ग्लास हाउस’ विमोचित
ओलीको प्रश्नः सरकारले गोली हान्ने अनि एमालेलाई दोष लगाउने ? (भिडियोसहित)
प्रमुख दलबाट वीरगञ्ज महानगरपालिकामा उम्मेदवार को को ? (सूचीसहित)
अब नेपाली विद्यार्थीलाई अष्ट्रेलिया सजिलो
खुला सिमाना व्यवस्थापन गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट, कस्तो आउला परमादेश ?
चिनिया उपप्रधानमन्त्री वाङ याङ साउन ३० गते नेपाल भ्रमणमा आउने
चर्को शुल्क लिने रातो बंगलासहितका दुई सय विद्यालयमा तालाबन्दी (सूचीसहित)
Address : काठमाडाैँ महानगरपालिका वडा नं. २९ अनामनगर ।
Email : aajakonews@gmail.com
Website : www.aajakonews.com
Phone : 014102845